အတူဒါကြောင့်အများအပြားဂိမ်းများထွက်ရှိပါတယ်၊ဒါကြောင့်အနည်းငယ်သောအခြေပတ်ပတ်လည်တြန္းကား၊ဒါဟာမကြာခဏအဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားရန်ဒီယိုသးဘူးလွ်င္လည္းဤလောကသို့အပြန်အလှန်အလိုးအတွေ့အကြုံ။ ကျေးဇူးတင်စရာ၊ဤအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်သောအရာသင်ပျော်ရွှင်စေသည်အတွက်ဘောင်းဘီ၊လိုးသင်ျဂိမ္းအားပေးမည်ဟုကဒီမှာသင်တစ်ဦးစုဆောင်းမှု၏ခေါင်းစဉ်ရဲ့မွတ္ဥာဏ္ေရိုက်ကူးကြိုးနောက်တဖန်မကျော်နှင့်။ ကျွန်တော်တို့အတာ့္ရဲ၏စက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ဝေးကျနော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်များအတွက်အပူဆုံးသင်ျခေါင်းစဉ်အင်တာနက်ပေါ်မှာ၊သငျသညျချင်တာပေါ့ဒီမှာလာမီသင်နှောင့်အယှက်သွားဘယ်နေရာမှာမဆို။, ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာကိုလေ့လာသောယှဉ်ပြိုင်မှုလုပ်နေတယ်နှင့်အတူရိုးသားသင်ရဲ့ဝေးအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်များ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ငါလိမ့်မယ်စူးစမ်းအပြည့်အဝအရှိန်အလိုးသင်ျဂိမ်းအကြောင်းပြောအဘယ်အရာကိုသင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အတွင်းနှင့်နောက်ဆုံး၊အကြောင်းအကြံပြုအပေါ်တွန်းအားရရှိရန်အတွက်၏တစ်အရသာကိုကောင်းမြတ်ခြင်း။ အသံတူအစီအစဉ်ကို၊မှန်သော? ကောင်းစွာသင်စဉ်းစားလျှင်တော့ဆွဲသင့်မျက်စိအဆင်းအနည်းငယ်နှင့်ချေးၽြန္ုပ္၏နားမယ်ဒေနာရိရန်အတွက်ဒီဂိမ်းစီမံကိန်းသင်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်!
အမွှေးအကြိုင်အမှုအရာပွင့်ကိုချက်ချင်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြလိုးသင်ျဂိမ်းများသည်လုံးဝအခမဲ့ဝင်ရောက်ဖို့တယ်:အကြောင်းအဓိပ်မပြု'ကြဖို့ဘာမှမဆပ်ဖို့တက်လက်မှတ်ထိုးသင်စာသားအတိုင်းဘယ်တော့မှပေးပြီးအစီရင်ချင်ကြပါဘူး။ ကျနော်တို့ကူညီပံ့ပိုးကိုယ်ကိုကိုယ်ကနေတဆင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ၊ဒါပေမယ့်အများဆုံးအမြတ်အစွန်းတစ်ခုသည်ငါတို့အဘို့အအပစ္အပေးအယူကြပြီနှင့်အတူတတိယပါတီ။ ကျွန်တော်တို့ဆောင်ကြဉ်းသင်၏အကောင်းဆုံးအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ထွက်စစျဆေးနိုငျနှင့်ပြန်လာအတွက်၊ကျနော်တို့အတူသင်တို့ပေးနိုင်ခမဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းချမ်းသာသောစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်သင်ချထွက်ပည္ဆိုင္ရာအဘို့အသင်လာရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာ။, ဒါဟာတော်တော်လေးကောင်းသောသဘောတူညီပြီးကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ဖို့အစီရင်ခံစာအတွက်အချိန်နှင့်ဖြစ်ခြင်း၊လိုးသင်ျဂိမ်းများရှိလုံလောက်တဲ့ငွေသားအတွက်ဘဏ်အစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအထောက်အနည်းဆုံးနောက်ထပ် ၁၈ လ။ ကတည်းကကျွန်တော်တို့ထုတ်ဝေတဂိမ်းအသစ်လစဉ်လတိုင်း၊အရာအများကြီးလာနေစဉ်အခွန်ဘဏ္ဍာငွေစီးဆင်းမှုအတွက်နှင့်ကျွန်တော်တို့ရနိုင်သင်ပင်ပိုကြီးအရာတွေရှိသည်။ ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်လျှင်သင်အမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးမှာအပြာဂိမ္းချမ်းသာ၊လိုးသင်ျကပေးနိုင်တဲ့–အဘယ်သူမျှမမေးသောမေးခွန်းများ။, အိုး၊နှင့်ကျနော်တို့မှာဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါရပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကာအနိုင်ရမှပေးဆောင်'ဖြစ်စေ:ရိုးရှင်းစွာမတည်ရှိပါဘူး–ပန်သူတွေကိုကြောင်းထင်ကွဲအက်ပွင့်လင်းအိတ်သွားသူတို့ကိုကူညီ–မည်မဟုတ်!
နေစဉ်အခြားနေရာများမြှောက်ဝန်မှတက်အပေါင်းတို့၏သူတို့ရဲ့ဂိမ်းအားဖြင့်အညာဂ်ာ–လုံးဝဒဏ်ငွေ–ငါတို့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်င့်ဆင်းသွားလမ်းများသာပူဇော်သက္ကာဘို့အွန်လိုင်းဂိမ်း။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်နက်နက်ရဲ့အနာဂတ်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ယုံကြည်ကြောင်းရှိသည်ဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကြီးမြတ်အတွေ့အကြုံ၊သင်သွားဖို့ရချင်ဖြစ်အရေးယူသို့အလျင်အမြန်တတ်နိုင်သမျှ။ ဤနည်းလမ်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းအထောက်အပံ့များ၏အကြိုက် MacOS နှင့် Linux ဖောက်သည်များ:နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ယောက်ျားတွေနိုင်ကြသည်ပြေးနောက်ဆုံးပေါ်စုေများ၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီ၊သင်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်များအတွက်လောကအပျော်အပါး။, ပါကစမိုဘိုင်းဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်လိုက်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့အပိုင်းများ၏အရေးယူပေမယ့်၊ကျနော်စိတ်ဖိစီးသောအမများကိုလည်းအများအပြားဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းရွေး iOS သို့မဟုတ်။ ဒီအေျကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာအပေါ်အလုပ်မလုပ်၊ဒါကြောင့်မျှော်လင့်ကြာ၊မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားချင်သောပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုးသင်ျစုအမည်တူခံစားနိုင်! အိုး၊ဒါဟာသွားသင့်ဟုမပါဘဲ:ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဆောင်ခဲ့၏သင်၏အပြောင်တြန္းညမ်းနှင့်မိသားစုထြင္ခဲ။ ကိုင်တွယ်နိုင်ပါကြောင်း?, တခြားနေရာသွားကြသောကြောင့်၊ဒါကြောင့်မုန့်နဲ့ထောပတ်၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ရန်တာပေါ့မကောင်းတဲ့အချိန်ရှိသည်လျှင်သင့်ရဲ့ကြက်တက်မဟုတ်ပါနှင့်လက်မှာအလုပ်တစ်ခုကို!
ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကိုတတ်ချင်ဖုံးမှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအဘယျသို့လိုးသင်ျဂိမ်းကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်:ကျွန်တော်ထင်လျှင်သင်ကမှာကြည့်ဒီဓိဋ္ဌာန်ကျကျ၊သင်တစ်ဦးတွေ့မြင်နိုင်သည်သောအလုပ်တစ်လျောက်ပတ်သောကြိုးစားအားထုတ်မှုအောင်မှစုဆောင်းမှု၏ညမ်းဂိမ်းဒီနေရာမှာအဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်၊မယုံကြည်သောသူနှင့်အတူမည်သူမဆိုအတူလိင်ကိုစွဲလမ်းသောသူသည်လည်းသို့အတွေးအခေါ်၏မိခင်၊သား၊သမီးနှင့် daddies စုတ်သွားသည်အိမ်မှာမှန်ခံစားရနှင့်အတူအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဟာအပေါ်ချပြီး။ ဒါကြောင့်စဉ်းစားလိုက်ပါအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးယနေ့မြင်ကိုယ်အဘို့အဘယ်သို့လိုးသင်ျဂိမ်းများမှာရှိပါတယ်။, သင့်ရဲ့ကြက်သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်၊ပြီးနောက်သင်သည်အကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ပါလိမ့်မယ်–ဒါကြောင့်တစ်ဦးတောက်ပသောဂြိုဟ်ကွင်းဆက်သက်ရောက်မှုနှင့်ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းခံရဖို့တာပေါ့ကျော်အလနှင့်အတူအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ထိုအခါစားပွဲပေါ်ထားရန်!